Ra’iisul Wasare Rooble;”Ma jiro Muwaadin Soomaaliyeed oo laga celin karo inuu u safro gobolada dalka” | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ra’iisul Wasare Rooble;”Ma jiro Muwaadin Soomaaliyeed oo laga celin karo inuu u safro gobolada dalka”
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay arimmo kala duwan oo ay ka mid yihiin khilaafka gobolka gedo,doorashooyinka dalka,xayiraadaha lagu soo rogo siyaasiyiinta iyo diyaaradaha iyo hankiisa siyaasadeed.
Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay munaasabad uu kaga guddoomay Guddiga Dib u heshiisiinta Gobolka Gedo sida ay ku soo xaliyeen khilaafka ka jirey gobolkaas.
“Waxaan u umahadcelinayaa guddiga dib u heshiisiinta gobolka gedo ee ka koobanaa wasiirada arrimaha gudaha maamul goboleedyada dalka,waxayna ku guuleysteen xaaladihii ka jirey gobolka gedo.”ayuu yiri ra’iisul wasaare Rooble.
Waxa uu sheegay Ra’iisul wasaaraha in arrinta gobolka Gedo ay ka harsan tahay oo kaliya in wareegto ay ka soo wada saaraan ra’iisulwasaaraha iyo madaxweynaha Jubbaland madaxda degmada Garbahaarey.
Isagoo ka hadlayay arrimaha safarada siyaasiyiinta dalka oo dhowaan siyaasiyiin laga soo celiyay qaar kamid ah degmooyinka dalka ayuu sheegay ra’iisul wasaaraha inaan muwaadinka Soomaaliyeed laga celin karin magaaladuu doonayo inuu tago isla markaana iska soo sharaxo.
“Socdaalka waa muhiim muwaadinka xaq ayuu u leeyahay in uu safro, muwaadinka soomaaliyeed ee musharaxa ah waa in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinimo xaq ayuu u leeyahay fikirkiisa.”ayuu sii raaciyay.
“War baa isoo gaaray in dad meelo kala duwan laga celiyay qofka muwaadinka ah lagama celin karo Air Porka, haddii isoo gaartana tallaabo ayaa laga qadayaa, diyaarad lagama celin karo Garbahaarey, diyaarad lagama celin karo Kismaayo”
Ra’iisul Wasaaraha ayaa amray hay’ada socdaalka,Booliska iyo Nabadsugida inaysan ka celin muwaadinka Soomaaliyeed dalkiisa meeshuu uu doono ka tago dalkiisa iyo in diyaaraduhu meesha ay doonaan tagaan,isagoo ku goodiyay inuu talaabo ka qaadi doono ciddii ku kacdo falkaas.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa khudbadiisa ugaga hadlay khilaafka ka jira siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Waqoyi waxana uu rajo wanaagsan ka muujiyay in xal laga gaari doono dhowaan.
“Arrimaha Somaliland wadatashiyo ayaan wadaa madasha anigaa ayay masuuliyada i saaratey wadahadalo ayaa socda anigoo la tashanaya gudoomiyaha Aqalka sare iyo raisul wasaare ku xigeenka meel wanaagsana waa ay marayaan wadahadalada.”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Rooble.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa kaga dhawaaqay kulankan maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho inuusan dooneyn in uu isu soo taago XIlka Madaxweynaha amaba uu noqdo senator ama xildhibaan.
Ugu dambeyntii ra’iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta in ay ka tagaan magaalada caasimada dalka oo ay doorashooyinka ay ka dhacayaan gobolada isagoo ku celiyay in ay doorashada dalka ka bilaabatay.
Ra’iisul Wasare Rooble;”Ma jiro Muwaadin Soomaaliyeed oo laga celin karo inuu u safro gobolada dalka” was last modified: July 22nd, 2021 by Admin
Ra’iisul Wasaaraha X.F.S oo ku baaqay in dadkii barakacay ay dib u soo laabtaan
Faah-faahin ka soo baxeysa Khasaaraha ka dhashay Qaraxa gaari ee Waaberi ka dhacay